I-Pixel 3 iya kuhlaziywa ukulungisa iingxaki zememori | I-Androidsis
UGoogle ekugqibeleni usifumene isisombululo sokulungisa iingxaki Imemori yePixel 3. Iya kuba ngohlaziyo abanini bePixel abanokulibala ngazo iingxaki zememori ezikhokelele uninzi kwisitrato sobukrakra.
Ngokukodwa ngefowuni ejolise phezulu kakhulu kwifoto, kunye nokubala kunye nesoftware emangalisa kangaka, eshiye ukhuphiswano kude kakhulu. Kodwa ayizizo zonke izinto ezigqibeleleyo kule smartphone usenenye ingxaki.
Njengaye Kwenzeka nomxholo weefotoIPixel 3 ikhe yanako iingxaki ezinzulu zememori ukungabinakho ukuba nezicelo ezininzi zivulwe ngaxeshanye. Ingxaki enzulu yokwenza izinto ezininzi kunye nabo basebenzisi abasuka kwenye iapps baye kwenye ngokungabinangxaki.
Nangona iPixel 3 ine-4GB ye-RAMYanele ngaphezu kokuba ujongane nazo zonke ii -apps ezinzima okanye loo midlalo esiye sonwaba ngakumbi ngayo; Intoni izakwenzeka ngokufika kweBlizzard kwi-Android.
Ingxaki yememori yePixel 3 ilele kwinto yokuba xa inkqubo ikuqonda oko zininzi kakhulu iiapps ezisebenza ngasemva, bavale kwangoko. Ke ukuba ungumnini wePixel 3 kwaye uqaphele ukuba ngequbuliso u-Facebook okanye omnye wayengasekho kwii -apps zamva nje, konke oko kungenxa yesiphene sedama.
Iyakuba ngeveki xa uhlaziyo olonwabileyo luza kwiPixel 3 eya kuthi ivumele ingxaki yememori ukuba idlulele kubomi obungcono. Umcimbi obaluleke kakhulu ukuze sikwazi ukusiphatha ngokwethu yonke imihla ngefowuni yethu kunye nezo zininzi iiapps esihlala sinazo ezivulekileyo zokutshintsha ukusuka kwenye siye kwijiffy. Sele sithethile kweyakhe umzuzu wengxaki.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » UGoogle uza kuhlaziya iPixel 3 ukulungisa iingxaki zememori